İmamoğlu: Natiijooyinka Aqoon-isweydaarsiga Channel Istanbul waxaa lala wadaagi doonaa qaranka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu: Natiijooyinka Aqoon-isweydaarsiga Channel Istanbul
10 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
imamoglu channel istanbul caladay natiijooyin ayaan umadda la wadaagi doonaa
“Channelka Aqoon-isweydaarsiga ee loo yaqaan" Channel Istanbul Workshop tarafından "oo ay soo qabanqaabiyeen IMM wuxuu ku bilaabay ka-qaybgalka hoggaamiyaha CHP Kemal Kılıçdaroğlu iyo Guddoomiyaha Xisbiga WOD Meral Akşener.
Khudbaddiisii ​​furitaanka, Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu wuxuu yidhi, “Istanbul magaaladu qasab kuma ahan Kanal Istanbul. Si kastaba ha noqotee, Istanbul waxaa waajib ku ah inay bilawdo maalgalin taariikheed oo toos ah, oo ay ku maal gasho wadooyin kale oo badan oo dhulka hoostiisa ah iyo gaadiidka magaalada, iyo in la xaliyo dhibaatada taraafikada ee aan la xalinin tobanaan sano sida magaalooyinka oo dhan ilbaxnimada ah. Istanbul waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, horumariso oo ay kordhiso meelaha haray ee cagaaran. Istanbul waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, horumariso oo abuurto goobo cusub. Istanbul waxaa waajib ku ah inay raadsato cunno, cabto caano oo ay siiso carruurteeda yar fursado waxbarasho dugsi-horaad oo aan heli karin nafaqo ku filan oo heli karin waxbarasho ku filan. Istanbul waxaa waajib ku ah inay siiso fursado waxbarasho, inay bixiso deeqo waxbarasho iyo inay u abuurto fursado shaqo dadkeeda da 'yarta ah. Istanbul waxaa waajib ku ah inay haweenka siiso fursad ay kaga qaybgalaan nolosha bulshada nabad iyo xasilooni.
Istanbul waxaa ku waajib ah inay fududeyso nolosha dadka shaqo la'aanta ah, kuwa liitaa iyo kuwa hawlgab ah. Waxaan tixgelinaynaa sidii loo fulin lahaa dhammaan waajibaadka saaran Istanbul inay mudnaan u leeyihiin annaguna waan u shaqeynaa. Emamoglu wuxuu carabka ku adkeeyay in dhibaatooyinka Istanbul aysan ahayn oo kaliya mas'uuliyadooda balse ay sidoo kale tahay maamulka dhexe. Annagu waxaan diyaar u nahay diyaarna u nahay inaan ka shaqeyno sidii aan ula shaqeyn lahayn dowladda wax walba. Ma jiraan wax calaamad su'aal ah oo maskaxdeena ku jirta. Waxaan leenahay hal shuruudood: Ma jiro qof dhahaya, 'Waan ogahay, waan yeelayaa' Cidina kor uma qaado. Waxaan horeyba cod ugu haysannay dhulkeenna. Dhageyso Mevlana. Fiiri wuxuu yiri Nabiga: Ereygaaga kor u qaad; ma ahan codkaaga. Roobku wuu da’a ubaxa; ma aha onkod '. Isaga; Aynu wada dhegeysanno ereyada dadka, khubarada iyo saynisyahannada. Aynu diyaar u nahay, daacad ah oo daacad ah helitaanka sabab guud oo aan xukunno ..
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM) ayaa ka hadashay mashruuca Kanal Istanbul, oo ka mid ah ajendaha ugu muhiimsan qodobbada ugu dambeeya, kaasoo si toos ah u khuseeya mustaqbalka magaalada. Aqoon isweydaarsiga 'Channel Channel ee Istanbul' oo ay soo qaban qaabisay IMM ayaa isu keenay saynisyahano, qareeno iyo khabiiro maaliyadeed oo ka kala socda heerar kala duwan. 4 saynisyahano ayaa fikradahooda ku saabsan Kanal Istanbul ku wadaagay 8 hool oo kala duwan iyo 40 gole kala duwan. Hogaamiyaha xisbiga CHP Kemal Kılıçdaroğlu iyo gudoomiyaha xisbiga GOOD Meral Akşener ayaa sidookale kaqaybqaatay aqoon isweydaarsiga halkaas oo doodii ugu horeysay ee dadweynaha ee Istanbul Istanbul. Kuxigeenada kooxda CHP iyo gudoomiye ku xigeenka kooxda, Gudoomiyaha xisbigaPP Istanbul Canan Kaftancıoğlu iyo Gudoomiyaha Gobolka GoOD ee Istanbul Bugra Kavuncu, xildhibaano, wakiilo xisbi siyaasadeed, badhasaabyo, wakiilo ka socda xisbiyada siyaasadeed, maareeyayaasha ururka, xubno xirfadlayaal ah Muwaadinku sidoo kale wuxuu ka qaatay meheraddii aqoon isweydaarsiga. Gürkan Akgün, oo ah madaxa waaxda dambiyada iyo magaalada, ayaa khudbaddii ugu horreysay ka jeediyey cinwaanka 'Thei The Past iyo Bandhiga Channel ee ayda Istanbul ayda aqoon isweydaarsiga, halkaas oo ururada warbaahinta gudaha iyo dibadaba ay muujiyeen xiiso weyn.
VAR HESHIISYADA AY KU SAABSAN YAHAY SOCIETY ”
Khudbadda furitaanka aqoon isweydaarsiga waxaa sameeyey Madaxweynaha IMM-da Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu wuxuu ku bilaabay khudbadiisa isagoo u dabaaldegaya Ocak Janaayo 10-keeda Maalinta Shaqaalaha Saxafiyiinta Adduunka ın oo ka mid ah xubnaha warbaahinta daawanayey aqoon isweydaarsiga. Istanbulmamoğlu wuxuu yidhi "Istanbul waa magaalo qaali ah oo qaali ah sidaa daraadeedna ay lama huraan tahay in xitaa hal pickaxe ay soo baxdo oo ay sharraxdo sababta ay u qasabtay," ayuu yiri İmamoğlu.
“Kanal Istanbul waa mashruuc wax ka badali doona juqraafi ahaan Istanbul oo si daran saameyn ugu yeelan doonta dhammaan dhinacyada nolosha dabiiciga iyo nolosha magaalooyinka. Kuwa keena mashruucan ajendaha waxaa ku waajib ah inay sharraxaan sababta ay waajib noogu tahay inaan sidaas samayno oo aan bulshada ka dhaadhicinno. Kanal İstanbul waa qalliin aad u weyn oo aadna khatar badan oo qofna weligiis dhihi doonin haa haddii aysan sidaa ahayn mooyee. Waa hawlgal gebi ahaanba khalad ah. Istanbul waa la goyn doonaa waana la goyn doonaa. Nidaamyada muhiimka ah ee Istanbul waa la dhaawici doonaa. Qeybo ka mid ah magaalada Istanbul waa curyaami doonaan. Meelaha qaar waa la curyaamiyey. Kuwa magaalada u soo gudbiyay qalliinkan khatarta ah, ee dilaaga ah ma dhihi karaan 'waxkastoo aad dhahdo, qalliinkan waa la sameyn doonaa'. Kuwa madaxooda saaray inay sidan sameeyaan waa inay noo sheegaan sababta aan qaliinka u sameyn karno. Dhamaan laakiin dhamaanteen waa inaan fahamno sababta ay tahay in Istanbul loo jaro loona jaro. Wadajir ahaan, waa inaan ku qanacsanaano sababaha waajibkaan leh annaga oo leh 16 milyan iyo xitaa 82 milyan oo muwaadiniin ah. Dhamaanteen waa inaan ogaano wax walba oo aan baranno faahfaahin walba oo ku saabsan halista qalliinka weyn ee lagu soo rogay Istanbul. Waxaan marka hore ogaan doonnaa. Waxaan leenahay in ay bartaan. Markaa dhammaanteen waxaan go'aan ku wada gaadhnaa. Waxaas oo dhami waxay ku imaan karaan oo keliya iyadoo loo maro waxbarasho caafimaad iyo geedi socod fikir. Aqoon isweydaarsigan ayaa ujeedadiisu tahay inuu si cilmiyeysan u soo bandhigo dhammaan qatarta mindida lagu dhex ridi doono wadnaha Istanbul, oo ah Kanal İstanbul. ”
“WAA INAY CUDDUUDHU KU SAABSAN YAHAY, WAA INAY FARSAMO”
Imamoğlu wuxuu ku nuuxnuuxsaday inay dhegeysan doonaan waxa sayniska iyo saynisyahannadu dhahaan, “Waxaan isku dayi doonnaa in aan fahamno, baranno oo aan su'aal ka jawaabno. Waan ogaan doonnaa dhammaan khataraha uu Kanal Istanbul keeni karo, ka dibna midkeen kastaaba wuxuu isweydiin doonaa nafteena: Ma mudan tahay in la qaado khatarahaas oo dhan? Runtii ma waxaan ku qasban nahay Kanal Istanbul? Runta miyaa naloo sheegay? In kasta oo magaaladan iyo dalkani dhibaatooyin badan leeyihiin, haddana waa waqtigiisii ​​dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka? Dhaqankeenna ku aadan Kanal Istanbul ma ahan mid siyaasadeed laakiin waa mid muhiim ah. Sababtoo ah mashruucan ayaa ah midka ugu halista badan ee magaaladan ay wajihi karto taariikhdeeda oo dhan. Tani mashruuca ee ka keeneen, "de Wax alla wixii aad odhan, waannu wada yeeli doonnaa qalliin this 'kuwa Dhihi waxaa jira laba muran aasaasiga ah:' marinka markab ee Bosporus khataraha suurtogalka ah lagu wado in la noolaa oo waxaan idiin ballanqaadayaa in Turkey mashruucan uu yahay mid iyada u keeni doonaa dakhliga. ' Aad ayey muhiim u tahay in la hubiyo in maraakiibta, gaar ahaan kuwa xamuulka qaada ee khatarta ah, ay si badbaado leh uga gudbaan xadka. Dabcan, waa inaan dhammaanteen ahaanno taxadar. Si aan u xaqiijino nabadgelyada Boosaso, waxaan dhamaanteen garab istaagi doonnaa dowladeena oo aan taageero buuxda siin doonnaa tallaabo kasta oo ay dowladdeenu ku qaadi doontaa caalamka. Waa inaan sameynaa dhammaan noocyada iskaashiga. Qofna shaki kuma jiro. Laakiin markii aad u dhaqaaqdo marinnada maraakiibta waaweyn iyo kuwa khatarta leh oo aad uga dhaqaaqdo qayb ka mid ah Istanbul una dhaqaaqdo dhinaca kale, ma xallin kartid dhibaatada amniga. Wax sidan oo kale ah ma jiraan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ognahay in Canal Istanbul aysan noqon karin bedel marka loo eego ballackeeda iyo qoto-dheer marka loo eego maraakiibta waaweyn iyo inaanan ku qasbi karin maraakiibta inay ka gudbaan kanaalka halkii ay ka isticmaali lahaayeen Bosphorus. Cidina nama gelin, sidaa darteed, waa inaan hadlaa, carruurta! wax kasta oo marinka ka Halkee Istanbul, maraakiibta khatar ah, warqaddii u Turkey waxaa waajib ku ah in ay gudbaan heerka ammaanka sare u by jideeyey. Waxa ugu weyn ayaa ah in tan la gaaro.
PN KU SOO DHAWAADA SAMSUN-CEYHAN PIPELINE KU SOCOTA XARUNTA CHANNEL EE.
Channel Istanbul iyo Strait of Istanbul waxaa looga golleeyahay in lagu yareeyo howsha safarka saliida, gaar ahaan waxay muujineysaa in Imamoglu, xaaladdani sidoo kale waa khalad, ayuu yiri. İmamoğlu ayaa yidhi, alıp Ma bixin kartid tan adiga oo ka qaadaya dariiqa khad ilaa kanal. Waxa loo baahan yahay in la qabto ayaa ah in la horumariyo oo la hirgeliyo qaabab kale oo kala duwan sida Samsun - Ceyhan Oil Pipeline. Ka tagida dhammaan cabirradaas iyo qaabab kale duwan, sax ma ahan, ma ahan mid caqli-gal ah, ma ahan mid macquul ah in la gaaro gunaanadka 'Channel-ka Istanbul wuxuu muhiim u yahay amniga Bosphorus'. Taas bedelkeeda, waa diyaarinta dhulka 'dhacdo dhacday', si loo soo saaro cudurdaar. Milkiilaha mashruuca Istanbul Canal ah, marka labaad ku doodaya in ay Turkey keeni lahaa dakhliga. Suurtagal ma aha in la fahmo waxa ay ku doodayaan aasaaska tan. Xitaa ma cada lacageed, cidda iyo sida qaab maalgalineed loogu fulin doono. Xitaa xitaa waxa la sameeyo! I rumaysta, ma cada waxa la sameeyo. Habeenkaan waxaan ku lumineynaa this. Maalin kasta waxaa la sheegaa nooc ka duwan ..
Khudbadiisa, Imamoglu, oo kamid ah kaqeybgalayaasha aqoon isweydaarsiga. Dr. Wuxuu la wadaagay kaftan ka yimid Derin Orhan oo uu ka helay Nasrettin Hoca. Am A Hodja kaftan ayaan ka helay Hodja, ”İmamoğlu ayaa yidhi," Nasrettin Hodja warqad ayey qortay. Ilmuhu wuxuu fidiyay baqshadda, wuxuu yiri; Tan u dir. Wiilkii ayaa helay warqaddii. Wuxuu yidhi, Waxba odhan maayaan, way madhan tahay. Hodja 'Olsun, oo ku dhex jira' ayaa jawaabtii ka jawaabtay 'ayaa yiri. Am Tani waa waxa uu mashruuca ii sheegay, ayuu yidhi. Themamoğlu wuxuu yiri "Milkiilayaasha mashruuca Kanal Istanbul, nasiib darrose, ha u dhowaanin cabirka dhaqaalaha ee arrinta iyada oo laga hadlayo halista maal-gashade dhabta ah, ayuu yiri İmamoğlu.
“CHANNEL MA AHAAN SIYAASADAHA CAAWIMAADA-GUDAHA”
Leri Waxay yiraahdaan: 'Waxaan fureynaa kanaal, lacag ayaan kahelaa marinka, waxaan ka dhisa dhismooyin hareeraha mareenka, lacagna halkaas baan ka helayaa!' Tani maaha qaab ku habboon dunida maanta. Tani maahan qaab dhaqaale. Tani maahan qaab macquul ah. Tani maahan qaab sharci ah oo waafaqsan heshiisyada caalamiga ah. Waa moodal ku saleysan oo keliya carrada, la taaban karo iyo kirada, oo aan lahayn wax soo saar iyo tikniyoolajiyad horumarsan, nasiibdarrona ma qaadaan qiimaha lagu daray iyo aragtida sumadda. Qaabkan, ma sameyn kartid lacag, uma abuurin karto soo kabasho dhaqaale iyo shaqo adduunka maanta. Lacag malahan taas. Warbixintu way cadahay. Turkey waa barta dhexe ee aan u isku dayay sanadkii hore iyo soo galay. Heerka shaqo la’aanta iyo saboolnimada ayaa iska muuqata. Mashruuca Channel Istanbul in la keeno 9 sanno ee ugu danbeysay, ajandaha Turkey ee waqti ka waqti, waqti ka waqti sidoo kale dhibicda caan ka ajandaha, ma jirto sabab la taaban karo. Kuwa ku dhawaaqay mashruucan markay qaylo weyn sameeyeen ka hor doorashadii 2011, waxay si aamusnaan ah u gudbiyeen arrinta doorashadii guud ee 2015 iyo doorashooyinka maxalliga ah ee Istanbul ee 2019. Isla markiiba, waxay ku kululaanayaan arrinta oo waxay isku dayayaan inay naga dhigaan fool ka fool waxoogaa yar. Halkan waxay ka soo saaraan olole siyaasadeed oo cusub. Nasiib darrose, uma baahnin mashruucan, oo salka ku haya siyaasad maalinle ah iyo dhowr xiriiro ganacsi iyo xiriir kiro, iyo siyaasadan isbadalka leh, ee isbeddelada lagu fulinayo mashruucan. Ma jiro wax xusuus ah oo laga adkaado. ”
MADAXWEYNAHA ISTANBUL WAA MUWAADINIMADA ”
Annaga oo ogaaney in dhibaatooyin badan oo muhiim ah oo muhiim u ah dalka İmamoğlu, "Turkiga waxaa waajib ku ah in Istanbul Channel ma aha dal. Istanbul ma ahan magaalo qasab ah. Si kastaba ha noqotee, Istanbul waxaa waajib ku ah inay bilawdo maalgalin taariikheed oo toos ah, oo ay ku maal gasho wadooyin kale oo badan oo dhulka hoostiisa ah iyo gaadiidka magaalada, iyo in la xaliyo dhibaatada taraafikada ee aan la xalinin tobanaan sano sida magaalooyinka oo dhan ilbaxnimada ah. Istanbul waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, horumariso oo ay kordhiso meelaha haray ee cagaaran. Istanbul waxaa waajib ku ah inay ilaaliso, horumariso oo ay kordhiso kheyraadkeeda biyaha si taxaddar leh. Istanbul waxaa waajib ku ah inay raadsato cunno, cabto caano oo ay siiso carruurteeda yar fursado waxbarasho dugsi-horaad oo aan heli karin nafaqo ku filan oo heli karin waxbarasho ku filan. Istanbul waxaa waajib ku ah inay siiso fursado waxbarasho, inay bixiso deeqo waxbarasho iyo inay u abuurto fursado shaqo dadkeeda da 'yarta ah. Istanbul waxaa waajib ku ah inay haweenka siiso fursad ay kaga qaybgalaan nolosha bulshada nabad iyo xasilooni. Istanbul waxaa ku waajib ah inay fududeyso nolosha dadka shaqo la'aanta ah, kuwa liitaa iyo kuwa hawlgab ah. Waxaan u aragnaa inay tahay mudnaan waxaana ka shaqeynaa sidii aan u fulin lahayn dhammaan waajibaadka saaran Istanbul ”.
WELIGEEDA UU RIIX KA HELI KARO RAGGA S
Emamoglu wuxuu carabka ku adkeeyay in dhibaatooyinka Istanbul aysan ahayn oo kaliya mas'uuliyadooda balse ay sidoo kale tahay maamulka dhexe. Annagu waxaan diyaar u nahay diyaarna u nahay inaan ka shaqeyno sidii aan ula shaqeyn lahayn dowladda wax walba. Ma jiraan wax calaamad su'aal ah oo maskaxdeena ku jirta. Waxaan leenahay hal shuruudood: Ma jiro qof dhahaya, 'Waan ogahay, waan yeelayaa' Cidina kor uma qaado. Waxaan horeyba cod ugu haysannay dhulkeenna. Dhageyso Mevlana. Fiiri wuxuu yiri Nabiga: Ereygaaga kor u qaad; ma ahan codkaaga. Roobku wuu da’a ubaxa; ma aha onkod '. Isaga; Aynu wada dhegeysanno ereyada dadka, khubarada iyo saynisyahannada. Aynu diyaar u nahay, niyoonno oo daacad ah helitaanka maanka guud iyo xukumadda. Aqoon isweydaarsiga maanta waa soosaarka fahamkan iyo dadaalkan. Aqoon-isweydaarsiga maanta waa wax soo saarka dadaalka lagu gaadhayo maanka iyo go'aan wadaagga. Aqoon isweydaarsiga maanta ayaa ah waxsoosaarka dadaalka lagu badbaadinayo magaaladan qadiimka ahayd, oo ahayd gogol dhaafka ilbaxnimada, mustaqbalka. Aqoon isweydaarsiga maanta waa mid ka dhashay dadaal lagu doonayo in lagu waydiiyo dalka fikirkiisa halkii loo dalbi lahaa umadda. ”
IZ Waan la wadaagi doonaa natiijada aqoon-isweydaarsiga qaranka ”
Imamoğlu wuxuu cadeeyay inay u soo dirayaan dhamaan natiijooyinka aqoon isweydaarsiga dhamaan maamulada leh masuuliyada ka saran go’aamada ku saleysan magaca iyo qarankaba. “Markaa, waxaan u gudanaynaa masuuliyadeena dhanka qiimaha magaalooyinkaan aadka loo jecel yahay iyo 16 milyan oo reer Istanbul ah heerka ugu sareeya. In kasta oo aan cidina ka hadlin, qofna fursad uma helin inuu ka doodo arrinta, wax walbana waxaa laga qaatay dabka sidii haddii la doonayo in la soo afjaro, waxaan qaadnay dadaalka sidii IMM oo aan dadka ugu wargelin lahayn. Waxaan ku casuunnay masuuliyiinta ay quseyso ee gobolkeena inay masuuliyada qaadaan. Waxaan u abuurnay goobo saynisyahano ay ku hadlaan. Marka hore waxaan qabanqaabinay dood-cilmiyeedka biyaha ka dibna aqoon isweydaarsigan. Intaa ka dib, waxaan sii wadi doonnaa inaan bixinno dhammaan halganka sharciga ah ee lagama maarmaanka u ah. Waligeen kama noqon doonno waajibaadkayaga iyo mas'uuliyadaheenna sharciga ah. ”
BAK Fiiri indhaha carruurtaada, carruurtaada awoowayaasha T
Maanta waxaan rabaa inaan la hadlo qofkastoo dhageysta, dhamaan reer Istanbul iyo dhamaan muwaadiniintayda, İm ayaa yiri İmamoğlu wuxuuna yiri: "Fadlan is hor taaga caruurtaada iyo caruurtaada ayeeyo maanta. Indhahooda fiiri. La soco muuqaal wanaagsan. Ma u malaynaysaa inay u baahan yihiin mashruucan? Ma u malaynaysaa inay tahay tan ugu camal fiican ee ay mustaqbalkooda u qaban karaan? Miyaad u malayn inay filayaan midab cagaaran, ka rayn rayn leh, xor ka ah xorriyadda iyo ilbaxnimada Istanbul ka badan kuwa maamula magaaladan iyo dalkan maanta? Mise isagu wuxuu doonayaa magaaladan in lagu sameeyo qalliinkan khatarta ah? Waxaan nahay wakiillo. Waxaan u geyn doonnaa dalkan. Tani waa arrinta dhabta ah ee innaga haysata, dhammaanteena ku nool magaaladan iyo dalkan, iyo midkeen kasta oo ka buuxa hoolkan. Oo kanina waa arin muhiim ah. Mana jiraan wax, laakiin aan siyaasad ahayn, in laga wada hadlo arrintan, in la isku dayo in la fahmo khataraha la xiriira Kanal Istanbul. Dhammaantiin halkaan u yimid maanta inaad masuuliyad iska saartaan, khabiiro ku cabiraya aragtidaada iyo dhammaan wufuudda ku lugta leh, qof kasta oo gacan ka geysan doona in bulshada lagu iftiimiyo iyadoo la wadaagayo fikradaha, dhammaan xisbiyada siyaasadeed, gaar ahaan Madaxweynayaasha, maamulayaasha hay'adaha aan dowliga ahayn, aqoonyahannada iyo khubaro; kaliya maaha oo ku hadlaya magaca 16 milyan oo reer Istanbul ah, laakiin wuxuu ku matalaa dhammaan jiilalka soo socda, annaga oo ku hadlaya carruurtayada iyo ayeeyadayada.
TCA ma socon karto baabuurta qaar oo ay qandaraaslayaashu qaateen oo loo qoondeeyay TCDD
Miyuu kanaalka saameynayaa natiijooyinka doorashooyinka Istanbul?
Qaybta injineerada Geological-ka: Maxkamadda Warbixinta Xisaabaadka waxay caddaynaysaa cabashooyinkayaga
Isaga oo ka hadlaya Seminaarka Dhulgariirka, İmamoğlu waa Mashruuca Dilka Channel ee Istanbul
Ekrem İmamoğlu oo la doortay
Ekrem İmamoğlu: 'Fikrad fiican kama haysto Channel Channel'
Ekrem İmamoğlu: Mashruuca Dhismaha Kanal İstanbul?
Jawaabta Channel Istanbul ee Imamoglu u socota Erdogan: Ma Jirto Hal Qof oo Garanaya 16 Milyan oo Qof
İmamoğlu: Baaritaanka Dhaqdhaqaaqa Hantida ee Wadada Canal Istanbul
Ekrem İmamoğlu Said Channel İstanbul waa mashruuc kiro
İmamoğlu Channel si aad ugu sheegtid Mashruuca Istanbul
İmamoğlu: Muwaadin kastaa Waa Inuu Diidaa Mashruuca Channel-ka Istanbul!
İmamoğlu wuxuu ku dhawaaqay sababta uu uga soo horjeedo mashruuca Kanal İstanbul 15 qodob
Isgoysyada maraakiibta Bosphorus
Waxyaabaha kale ee gaadiidka magaalooyinka Istanbul
Maalgashiga Magaaladda Istanbul
Si toos ah ula xiriir Ekrem
Natiijooyinka Aqoon-isweydaarsiga Channel Istanbul
Aqoon-isweydaarsiga Channel Istanbul